Tselatra | NewsMada
Nifamahofaho ny momba ireo naratra…: Raikitra ny tora-bato sy barazy tao Toamasina ...juin 4, 2020
Echaufourrées à Toamasina: Un relent de manipulation politique ...juin 4, 2020
Nifamahofaho ny momba ireo naratra: raikitra ny tora-bato sy ny barazy tao Toamasina
Echauffourées à Toamasina: un relent de manipulation politique
37 ny fandevenana tao anatin’ny telo andro: feno ny fasana kaominaly ao Anjoma Toamasina
Coronavirus : Madagascar s’approche de la barre des 1.000 cas
«Raharaha nahafaty ny Dr Daniel» – Toamasina: nentin’ny zandary aty Antananarivo ny profesora Stephan
51 contaminations en 72 heures: la ville de Toamasina s’étouffe
Nahatratra 42 ireo tranga vaovao, omaly: samy diabetika ireo olona telo matin’ny Coronavirus
«Raharaha nahafaty ny Dr Daniel» – Toamasina: nohadihadian’ny zandary, hiakatra fampanoavana ny profesora iray
Des foyers de tensions: hasard du calendrier ou manœuvre de déstabilisation ?
Par Taratra sur 10/07/2019
Kila hotohoton’ny afo ny taksiborosy Sprinter iray, omaly tolakandro tao Ampanefena Sambava. Hatreto aloha, tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firehetan’ny fiara fa avotra soa aman-tsara koa ireo mpandeha rehetra tao anaty fiara. Tsy nisy ny maty na naratra na teo aza ny fijoalajoalan’ny afo fa tafavoaka avokoa ireo olona rehetra tao anaty fiara. Tsy nisy noraisina intsony ilay fiara fa korontamby sisa niangana. May niaraka tamin’ilay fiara koa ny ampahany tamin’ireo entan’ny mpandeha.
Taksiborosy iray nivadika tany ambanivohitr’Ambohimahavelona distrikan’i Toliara II, omaly. Miisa 14 ireo mpandeha naratra tao amin’ity taksiborosy ity ka nentina haingana nihazo an’i CHU Tanambao Toliara. Voalaza fa vokatry ny fandehanana mafy no nahatonga ny loza. Efa nidina nanao fanadihadiana teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza ny zandary ka aorian’izay no hamantarana ny marina rehetra.
Betsaka ireo nahatsikaritra fa efa mipetraka eny amin’ny toerana fametrahana takelaka doka varotra ny laharana telefaonina azo antsoina haingana raha misy trangan-javatra mitranga tampoka eny anivon’ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy. Natao izao mba hanampiana ny rehetra manoloana ny tsy fandriampahalemana.
Fifanaraham-piaraha-miasa: mety tsy ho foana ny fanohanana ny fanatanjahantena 04/06/2020
Bras de fer – Afrika: mihantona avokoa ny fifaninanana 04/06/2020
Kitra any Frantsa: hiverina ao amin’ny FC Lorient i Morel 04/06/2020
Fanajariana ny kanto: mila mahatazona ny maha izy azy ny mpanakanto 04/06/2020
Volan’ny teny malagasy: tsy ny fandikan-teny no mahamaika 04/06/2020
Fakafaka: volan’ny teny malagasy indray !